တေးသံစုံကဇါတ် | November 2019
အော်ပရာများအတွက် Adguard တိုးချဲ့: အစွမ်းထက် Adblock
အင်တာနက်ပေါ်ရှိ Advertising ကြော်ငြာယခုနီးပါးနေရာတိုင်းတွင်တွေ့နိုင်ပါသည်: ကယင်း၏အရေအတွက်အားလုံးမှတ်သားဖြတ်သန်းရှိရာအရင်းအမြစ်များကိုရှိပါတယ်စသည်တို့ကိုဘလော့ဂ်များ, ဗီဒီယိုခွဲဝေမှု, အဓိကသတင်း portal, လူမှုရေးကွန်ယက်များ, အပေါ်ပစ္စုပ္ပန်က ... ဤဝန်ဆောင်မှုကိုအင်တာနက်အသုံးပြုသူများအကြားအလွန်ရေပန်းစားသောကွောငျ့ဒါကြောင့်, ဆော့ဖ်ဝဲ developer များအစီအစဉ်များကိုထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့် browser ကို add-ons တွေကိုခဲ့ကြရာ၏အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကြော်ငြာပိတ်ဆို့ဖို့ဖြစ်တယ်ဆိုတာအံ့သြစရာတော့မဟုတ်ပါဘူး။
အဆိုပါအော်ပရာ Turbo ဖွင့်ခြင်းနှေးကွေးအင်တာနက်နှင့်အတူဝဘ်စာမျက်နှာတင်မြန်နှုန်းတိုးမြှင့်ပေးနိုင်သည်။ ဒါ့အပြင်သူကယူနစ် loaded သတင်းအချက်အလက်နှုန်းပေးဆောင်သူကိုအသုံးပြုသူများအတွက်အကျိုးရှိသောအရာ, သိသိသာသာ bandwidth ကိုကယ်ဖို့ကူညီပေးသည်။ ဤသည်မှာအထူး server ကိုအော်ပရာအပေါ်ကိုအင်တာနက်ကနေတဆင့်လက်ခံရရှိသော data တွေကိုချုံ့ခြင်းဖြင့်အောင်မြင်နိုင်ပါသည်။
အဆိုပါအော်ပရာအစီအစဉ်ကိုထိုက်ထိုက်တန်တန်ကိုအကောင်းဆုံးနှင့်လူကြိုက်အများဆုံးကို web browser များထဲကတစ်ခုစဉ်းစားသည်။ သို့သော်သူအချို့အကြောင်းပြချက်မကြိုက်ဘူးဖို့ရှိပါတယ်, သူတို့ကဖယ်ရှားပစ်ရန်ဆန္ဒရှိနေကြသည်ဘယ်သူကိုလူတွေကိုရှိပါတယ်။ ထို့အပြင်အစီအစဉ်၏မှန်ကန်သောစစ်ဆင်ရေး restore လုပ်ဖို့စနစ်အတွက် bug ကိုကြောင့်ကြောင်း, အခြေအနေများရှိနေပါသည်ပြန်လည် install ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်သည်၎င်း၏ပြည့်စုံဖြုတ်လိုအပ်သည်။
အမှားတွေအော်ပရာဖျက်သိမ်းရေး: Opera က browser မှာ crossnetworkwarning
သငျသညျအော်ပရာကိုအသုံးပြုဖို့အခါဆွေမျိုးတည်ငြိမ်မှုရှိနေသော်လည်းအခြား browsers တွေနှိုင်းယှဉ်, လွန်း, အမှားအယွင်းများရှိပါတယ်။ crossnetworkwarning: အသုံးအများဆုံးပြဿနာတွေတအော်ပရာ bug ကိုဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်များ၏အကြောင်းရင်းရှာဖွေကြပါစို့နှင့်ထိုပြဿနာကိုဖြေရှင်းမယ့်နည်းလမ်းတွေကိုရှာဖွေကြိုးစားပါ။ အမှား၏အကြောင်းတရားများချက်ချင်းရဲ့ဒီအမှားများအတွက်အကြောင်းပြချက်သည်အဘယ်အရာကိုမြဲမြံစေကြကုန်အံ့။
အော်ပရာများအတွက် Flash ကို Video Downloader - ဗီဒီယိုများဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်နေရာလေးကို extension ကို
ဒါဟာဗီဒီယိုကိုနိုင်အောင်မလှယျကူ web-based သယံဇာတများမှ download, streaming မလျှို့ဝှက်ချက်ပါပဲ။ ဒီဗီဒီယိုကိုအကြောင်းအရာဒေါင်းလုဒ်လုပ်ဖို့, အထူး Loader ရှိပါတယ်။ ရုံတစျခုကဒီရည်ရွယ်ချက်အတွက်ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ tools များ၏, အော်ပရာများအတွက် Flash ကို Video Downloader တိုးချဲ့ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒါကို install ဖို့ဘယ်လိုရှာဖွေကြပါစို့နှင့်မည်သို့မည်ပုံဒီဖြည့်စွက်သုံးစွဲဖို့။
အင်တာနက်အသံမပြုမီကအသစ်အဆန်းခဲ့ပေမယ့်ယခုဖြစ်ကောင်းအဘယ်သူမျှမပီသို့မဟုတ်နားကြပ်ပေါ်လှည့်ခြင်းမရှိဘဲပုံမှန် surfing ကိုယ်စားပြုခြင်းမရှိပါ။ အကယ်. တစ်ချိန်တည်းမှာပင်, ထိုကာလကနေအသံမရှိခြင်း browser ကိုပြဿနာများ၏ထူးခြားချက်တစ်ခုဖြစ်လာသည်။ အသံ Opera မှာပျောက်ကွယ်သွားပါလျှင်ဘာလုပ်ထွက်ရှာတွေ့ကြပါစို့။ ဟာ့ဒ်ဝဲနှင့်စနစ်ပြဿနာတွေ, သို့သော်, Opera မှာပျောက်ဆုံးအသံ browser ကိုသူ့ဟာသူနှင့်အတူပြဿနာများမဆိုလိုပါ။
အော်ပရာ Browser ကို: ချိန်း Yandex home page ကို
Google က - စာရင်းများအရရုရှားအင်တာနက်အသုံးပြုသူအများစုမကြာခဏဒီအညွှန်းကိန်းပေါ်မှာငါတို့တိုင်းပြည်တွင်ပင်ကမ္ဘာတွင်ခေါင်းဆောင်စံချိန်သောမေးမြန်းချက်အင်ဂျင် Yandex, ဖြေရှင်း။ ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့သူချင်းနိုင်ငံသားများအများအပြားသင့် browser ၏အိမျစာမျက်နှာပေါ်တွင်တွေ့မြင်ချင်သောအံ့သြစရာတော့မဟုတ်ပါဘူးဆိုက် Yandex ဖြစ်ပါတယ်။
အော်ပရာ၏ hidden settings ကို
အဘယ်သူသည်အစီအစဉ်က hidden features တွေလိုက်ရှာဖို့ကြိုးစားဘဲနေရသနည်း သူတို့ရဲ့အသုံးပြုမှုဖြစ်ပါတယ်ပေမယ့်သူတို့ကသင်တန်း၏, ကဒေတာတချို့၏အရှုံးနဲ့ browser စွမ်းဆောင်ရည်ရဲ့ဖြစ်နိုင်ချေဆုံးရှုံးမှုနှင့်အတူဆက်နွယ်နေတဲ့အချို့သောအန္တရာယ်ဖြစ်ပါသည်, အသစ် unexplored အခွင့်အလမ်းများဖွင့်လှစ်။ အဆိုပါအော်ပရာ browser ၏လြှို့ဝှကျအ setting များကိုပါဝငျသောအရာကိုရှာဖွေကြပါစို့။
Flash Player ကို Opera မှာအလုပ်မလုပ်ပါဘူး: ပြဿနာကိုဖြေရှင်းနိုင်မှ 10 နည်းလမ်းများ
မကြာသေးမီကအဆိုပါအော်ပရာ browser ကိုသုံးစွဲသူပိုမို plugin ကို Flash Player ကိုအတွက်ပြဿနာများနှင့် ပတ်သက်. တိုင်ကြားမှစတင်ခဲ့သည်။ အတော်လေးဖြစ်နိုင်သည်ကြောင့်အော်ပရာအသုံးပြုသူများသည်၏ Flash Player ကို download စာမျက်နှာတွင်မှပြီးသားယနေ့ access ကိုပိတ်ထားအဖြစ် browser ကို developer များတဖြည်းဖြည်း Flash Player ကိုအသုံးပြုခြင်းဖယ်ရှားပစ်ချင်ဆိုတဲ့အချက်ကိုကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည်။
Program ကိုအော်ပရာ extension တွေနဲ့အတူအလုပ်လုပ်ကိုင်
အဆိုပါအော်ပရာဘရောက်ဇာကိုကြည့်ရှုက်ဘ်ဆိုက်များ၎င်း၏အလွန်ကြွယ်ဝသောလုပ်ဆောင်ချက်ကိုအခြားအစီအစဉ်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်, လူသိများသည်။ သို့သော်လျှောက်လွှာဖြစ်နိုင်ခြေ၏အကွာအဝေးကိုတိုးမြှင့်ဖို့ ပို. ပင် plug ကို extensions တွေကိုတဆင့်အောင်မြင်နိုင်ပါသည်။ သူတို့ရဲ့အကူအညီနှင့်အတူ, သငျသညျ, စာသား, အသံနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရက်တွင်အစီအစဉ်၏လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုချဲ့ထွင်ဗီဒီယိုနှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်များ၏လုံခြုံရေးကိစ္စများဖြေရှင်းရန်နှင့်တပြင်လုံးကို system ပေါ်တွင်နိုင်ပါတယ်။
အဆိုပါအော်ပရာဘရောက်ဇာ၏ installation နှင့်အတူပြဿနာများ: အကြောင်းရင်းများနှင့်ဖြေရှင်းနည်းများ
အော်ပရာဘရောက်ဇာကိုအထူးသဖြင့်ကျနော်တို့နိုင်ငံမှာအသုံးပြုသူများအကြားအတော်လေးရေပန်းစားသည်အရာကို web browsing ပြုလုပ်နေများအတွက်အလွန်အဆင့်မြင့် software ဖြစ်ပါသည်။ ဒီဘရောင်ဇာ၏ installation အလွန်ရိုးရှင်းပြီးအလိုလိုသိသည်။ သို့သော်တစ်ခါတစ်ရံတွင်, အမျိုးမျိုးသောအကြောင်းပြချက်များအဘို့, အသုံးပြုသူ program ကို install လုပ်မပေးနိုင်ပါ။
အဆိုပါအော်ပရာဘရောက်ဇာထဲမှာ Import ကို bookmarks ကို
Browser ကို tabs များချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့်အရေးကြီးသောက်ဘ်ဆိုက်စာမျက်နှာတွေမှာမြန်ဆန်လွယ်ကူစွာများအတွက်အသုံးပြုကြသည်။ သို့သော်သင်သည်အခြား browsers တွေကနေဖြစ်စေ, အခြားကွန်ပျူတာကနေသူတို့ကိုရွှေ့ဖို့လိုအပ်သည့်အခါကြိမ်ရှိပါတယ်။ သင် operation system ကို reinstall သည့်အခါများစွာသောအသုံးပြုသူများသည်ကိုလည်းမကြာခဏသွားရောက်လည်ပတ်အရင်းအမြစ်များလိပ်စာဆုံးရှုံးဖို့ဆန္ဒရှိကြပါဘူး။
အော်ပရာ Flash Player ကိုမမြင်ရပါဘူး။ အဘယ်သို့ပြုသနည်း
Flash Player ကို - နီးပါးတိုင်းကွန်ပျူတာပေါ်တွင်တပ်ဆင်ထားသည်ဖြစ်သောလူကြိုက်အများဆုံးဆော့ဖ်ဝဲ, တဦး။ ၎င်း၏အကူအညီဖြင့်ငါတို့သည်ကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေပေါ်မှာရောင်စုံ animations တွေကိုအွန်လိုင်းသီချင်းနားထောင်ကြည့်ရှုဗီဒီယိုများ watch, Mini-ဂိမ်းများကိုဆော့ကစားနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့အတော်လေးမကြာခဏကြောင့်အလုပ်မနိုင်, အလွန်မကြာခဏအော်ပရာ browser မှာအမှားအယွင်းများရှိပါတယ်။
သိမ်းဆည်းခြင်း site ကို bookmarks ကိုအော်ပရာဘရောက်ဇာ
မကြာခဏဆိုသလိုအင်တာနက်ပေါ်ရှိမည်သည့်စာမျက်နှာသို့သွားရောက်ခြင်း, ငါတို့အချို့အချိန်ပြီးနောက်, ငါတို့သည်နောက်တဖန်သူမ၏ကြည့်ဖို့အချို့သောအချိန်လေးမှတ်မိဖို့, ဒါမှမဟုတ်သတင်းအချက်အလက်များရှိ updated မဟုတ်ပါရှိမရှိရှာချင်တယ်။ သို့သော်စာမျက်နှာ၏မှတ်ဉာဏ်လိပ်စာအလွန်ခက်ခဲသည် restore, ဒါပေမယ့်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်မှတဆင့်ထိုသို့ကြည့်ဖို့ - ကအကောင်းဆုံးဖြေရှင်းနည်းမဟုတ်ပါဘူး။
အော်ပရာဘရောက်ဇာကို: အမြန် panel ကို Save
ဖော်ပြ-panel ကို browser ကိုအကြိုက်ဆုံးက်ဘ်ဆိုက်များမှအမြန် access များအတွက်အလွန်အဆင်ပြေသောကိရိယာတခုဖြစ်တယ်။ ထို့ကြောင့်အချို့သောအသုံးပြုသူများသည်အခြားကွန်ပျူတာကိုနောက်ပိုင်းမှာလွှဲပြောင်းဘို့ကကယ်ဖို့, ဒါမှမဟုတ် system ကိုဆုံးရှုံးမှုများမှ၎င်း၏ပြန်လည်နာလန်ထူ enable ဖို့ဘယ်လို, ထင်ပါတယ်။ အဆိုပါအမြန် panel ကအော်ပရာကယ်ဖို့ဘယ်လိုရှာဖွေကြပါစို့။
ဒါဟာအင်တာနက်ကိုအမြဲတစေ globalizing ကြောင်းဘယ်သူမျှမလျှို့ဝှက်ချက်ပါပဲ။ အသစ်သောအသိပညာ, သတင်းအချက်အလက်, ဆက်သွယ်ရေး၏ search အတွက်ဖောက်သည်များ, ပို. ပို. နိုင်ငံခြားက်ဘ်ဆိုက်များမှရွှေ့ဖို့အတင်းအကျပ်နေကြသည်။ သို့သော်၎င်းတို့အားလုံးကိုလုံလောက်စွာဝဘ်၏နိုင်ငံခြားအရင်းအမြစ်များအပေါ်ခံစားရလွတ်ရန်, နိုင်ငံခြားဘာသာစကားများဟောပြောလော့။
အော်ပရာ Browser ကို: အကို Web browser ကို Configure
အသုံးပြုသူများ၏တစ်ဦးချင်းလိုအပ်ချက်တစ်စုံတစ်ရာအစီအစဉ်၏ Proper configuration ကိုအလွန်မြန်နှုန်းတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်အထဲတွင်ခြယ်လှယ်များ၏ထိရောက်မှုတိုးတက်စေနိုင်ပါတယ်။ သိပ်မအုပ်စိုးကြောင်း browsers မျှချွင်းချက်ရှိပါတယ်။ ဘယ်လိုညှိဟာအော်ပရာ web browser ကိုစနစ်တကျထွက်ရှာတွေ့ကြပါစို့။
အော်ပရာဘရောက်ဇာကို interface ကို themes များ
အဆိုပါအော်ပရာဘရောက်ဇာကိုတစ်ဦးမျှမျှတတတင်သွင်းလိုက်သော interface ကိုဒီဇိုင်းရှိပါတယ်။ သို့သော်အသုံးပြုသူတစ်ဦးသိသိသာသာအရေအတွက်အစီအစဉ်၏စံပုံစံဒီဇိုင်းတွေနဲ့စိတ်ကျေနပ်မှုမဟုတ်ရှိပါသည်။ မကြာခဏဒီကြောင့်သုံးစွဲသူများ, အရှင်, သူတို့ရဲ့တစ်ဦးချင်းစီ, ဒါမှမဟုတ်သူတို့ပဲပျင်းကို web browser ၏ခါတိုင်းလိုမျိုးကိုဖော်ပြချင်ဆိုတဲ့အချက်ကိုရန်ဖြစ်ပါသည်။
အဆိုပါအော်ပရာ browser setting ကိုသွား
နီးပါးတိုင်းအသုံးပြုသူ, အဆက်မပြတ်ငါက၎င်း၏ဆက်တင်များသို့သွားခဲ့ရတယ်, တဦးတည်းကို browser နှင့်အတူအလုပ်လုပ်ပါတယ်။ သင်တစ်ဦးကို Web browser များတွင်ပြဿနာများဖြေရှင်းရန်အတွက် configuration tool များကိုအသုံးပြုနိုင်သည်, သို့မဟုတ်ရိုးရိုးကသင့်ရဲ့လိုအပ်ချက် fit မှတတ်နိုင်သမျှညှိနိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါအော်ပရာ browser setting ကိုဝင်ဖို့ဘယ်လိုရှာဖွေကြပါစို့။
Adobe Flash Player ကို plugin ကို Opera မှာကိုအပ်ဒိတ်လုပ်
Web ကိုနည်းပညာနေဆဲရပ်နေသည်မဟုတ်။ ဆန့်ကျင်တွင်, သူတို့နဲ့အနားသတ်ခြင်းဖြင့်ဖွံ့ဖြိုးဆဲနေကြသည်။ browser ကိုမဆိုအစိတ်အပိုင်းအချိန်ကြာမြင့်စွာ updated ရသေးလျှင်, web page များကိုပြသပေးမည်မဟုတ်ကြောင်းထို့ကြောင့်, အလွန်မြင့်မားဖြစ်နိုင်ခြေ။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, ကခေတ်မမီတော့ plug-in ဖြစ်ပါတယ် add-ons တွေကိုရှည်လျားအားလုံးသိထားပြီးသူတို့ရဲ့အားနည်းချက်ကြောင့်, ရာဇဝတ်ကောင်များအတွက်အဓိကကွက်ဖြစ်ကြသည်။